Elemental Dungeon dia Action RPG vaovao izay mampanantena zavatra betsaka | Androidsis
Elemental Dungeon dia hetsika RPG vaovao misy zavakanto pixel sy tranomaizina maro
Elemental Dungeon dia RPG vaovao tonga amin'ny Android, na dia tsy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao, ary izany dia miavaka amin'ny zavakanto pixel sy ny fanavaozana amin'ny famoronana ody. Izany hoe, isika dia mety ho tompon'ny singa ifotony, toy ny rivotra, tany, afo ary rano, mba hampifangaroana azy ireo ary hamoronana ody mahery vaika.
Lohateny tonga dodona ny hahazo lavaka ao amin'ny tontolon'ny RPGs izay mihasarotra hatrany, ary indrindra satria ny lalao karatra ankehitriny dia efa fironana. Eto isika dia hanana tranomaizina maro, ary tsy kely akory, izay ahafahantsika mamono fahavalo amin'ny fotoana tena izy nefa tsy mila miandry ny fihodinana.
1 Lalao RPG tsy misy fiovana amin'ny fihetsika rehetra amin'izao fotoana izao
2 Tranon-trano ambanin'ny tany miaraka amin'ny rano, tany, rivotra ary afo
3 Miaraka amin'ny zavatra kely rehetra hankafizana
Lalao RPG tsy misy fiovana amin'ny fihetsika rehetra amin'izao fotoana izao
Elemental Dungeon dia lalao iray mampiavaka ny hetsika tafiditra amin'izany tsy maintsy mampiasa ny bokotra sasany amin'ny majika, ary afindra ny maherifontsika lehibe amin'ireo tranomaizina ireo.
Raha manampy an'io isika dia tsy maintsy miditra tanteraka tranomaizina namboarina ho azy Isaky ny lalao tsirairay dia manana mihoatra ny enti-mahaliana mahaliana ny lalao.
Miresaka momba ireo ozona ireo aloha izahay. Ianao dia afaka manambatra ny an'ny rano, tany, rivotra ary afo mamorona vaovao hiteraka vokatra eo amin'ny tontolo iainana. Ohatra, ny tany dia azo ampiasaina hanakanana loharano afo iray izay manakana antsika tsy handalo, ary amin'izany isika dia afaka miresaka momba ireo ohatra samihafa izay ho sarobidy kokoa ny famosaviana noho ny famongorana ireo fahavalo.
Tranon-trano ambanin'ny tany miaraka amin'ny rano, tany, rivotra ary afo
Raha ao anaty RPG isika, midika izany fa tsy maintsy atao izany manatsara sy manatsara ny fahaizantsika hahafahanao mihazona ny mason'ireo biby goavam-be izay ho tonga amintsika ary haka ny trano-maizina hizahantsika izany.
Tsy maintsy mahazo ny trosantsika isika ny mety hilalao kilasy samihafa ary mihaona amin'ny mpampiasa farany aza, na lehibe, izay hizahan-toetra ny tenantsika. Niresaka momba ny fomba ahafahanao milalao Magicien na Hunter amin'ny kilasy hafa izahay.
Tsy ho diso anjara koa ianao Lalao PvP amin'ny Multiplayer izay napetraka ho fomba mahaliana hiarahana. Indrindra amin'ny fiadanam-po vokarin'ny lalao tsirairay izay hankafizintsika tsy misy maimaika ary ilay freemium izay mazàna dia mamela antsika malahelo kely rehefa tsy maintsy miandry hilalao. Eto maimaim-poana ny zava-drehetra, na dia azo atao aza ny maherifo vaovao; somary mitovy amin'ny Iron Marines avy amin'i Ironhide Game Studio izay ahafahantsika mividy mahery fo nefa tsy mandoto ny traikefa lalao maimaimpoana.
Miaraka amin'ny zavatra kely rehetra hankafizana
Elemental an'ny Elemental manana kely ny zava-drehetra ary na dia ny fomba multiplayer isan-karazany aza izay ahafahantsika milalao fiaraha-miasa na miatrika mpilalao hafa. Raha tsy navoaka eran'izao tontolo izao izy io dia takatsika fa mbola misy zavatra tokony hatsaraina. Toy ny lalao PvP izay tsy iasan'ny mpizara araka ny tadiavinay ary misy tara kely ihany koa. Raharaha hiandry kely sy haharetana io.
Ara-teknika dia lalao miantso io fiheverana ny vokatry ny mazia hita maso, ny famolavolana ny tranomaizina sy ny an'ny tarehin-tsoratra. Fampisehoana tsara ho an'ny zavakanto pixel izay manintona ny saina ary afaka mamorona mihoatra noho ny fotoana hita maso. Ankasitrahana fa ny fiatrajika dia misy akony tokoa amin'ny tontolo iainana ary izany dia vokatry ny fampifangaroana teknika sy ilay maso ilaina amin'ity karazana lalao ity.
Elemental Dungeon dia mbola tsy misy eto Espana, fa eny any amin'ny firenena miteny espaniola hafa. Azonao atao ny misintona azy avy amin'ny rohy izay omenay etsy ambany, ary amin'ny fotoana mety dia hahazoanao azy amin'ny Google Play Store. Raha mitady hetsika RPG tsara ianao, dia azonao atao izao ny mametraka azy io ary miditra ao anaty tranomaizina midadasika sy tsy misy dikany. Manantena aho fa hanavao izany izy ireo ary hanampy atiny bebe kokoa, ary hanatsara ny PvP eny an-dalana.
Misintona APK: Elemental an'ny Elemental
Ody rano, tany, afo ary rivotra
Trano goavambe lehibe sy kisendrasendra
Ny PvP dia mila fitoniana tsara kokoa ary tsy dia tara
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Elemental Dungeon dia hetsika RPG vaovao misy zavakanto pixel sy tranomaizina maro
diegarch0 dia hoy izy:
Tena tsara ny hetsika rpg izay ankafizin'ny maro
Valiny amin'ny Diegarch0
Ny Lenovo K10 Plus dia efa ofisialy: fantaro ny mampiavaka azy, ny vidiny ary ny fahafahany